အဆီပြန်အသားအရေအကြောင်းဒဏ္ဍာရီ – dermalogica-mm
oiliness - 2019၊ 29 ဩဂုတ်
အသားအရေကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အမှန်တကယ်တွင်ဆီအလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်လဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေပြားအဘို့အတက်သည်နှင့်ပျောက်သောအရာကိုအစားထိုးရန်ကြိုးစားနေသောကြောင့်! အဆီပြန်သည့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်အဆီပြန်သောအသားအရေကိုကိုယ်တိုင်ကုသသူများသည်မကြာခဏရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင့်အရေပြားကုထုံးပညာရှင်နှင့်စကားပြောပါကခေတ်မှီဆန်းပြားသောအဆီများသည်အပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်နေရောင်ကာကွယ်မှုနှင့်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်အပြည့်အ၀ ဆီစုပ်ယူနိုင်သောမိုက်ခရိုစကုပ်များပါ ၀င်ပါသည်။
နေထိတွေ့ခြင်းသည်အရေပြားအတွက်ဘယ်သောအခါမျှမကောင်းပါ။ နေကယာယီ“ ခြောက်သွေ့သော” အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံရသော်လည်းဆလွန်းဂလင်းများသည်ဆုံးရှုံးသွားသောရေနံကိုအစားထိုးရန်အလွန်အကျွံမောင်းနှင်သည်။ ရလဒ် - အရင်ကထက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆီများများလေဖြစ်သည်။
အရှုံးမပေးပါနှင့် အဆီပြန်သောအသားအရေသည်မည်သည့်အသားအရေနှင့်မျှမတူအောင်စီမံနိုင်သည်။ သင့်အသားအရေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည့်အရေပြားကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောပါ၊ ထို့နောက်အရေပြားကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများအပါအ ၀ င်သင့်လျော်သောရောဂါလက္ခဏာပြပါ။